Accueil > Gazetin'ny nosy > Ravalomanana Marc : Aza miteniteny foana fa mahamenatra
Ravalomanana Marc : Aza miteniteny foana fa mahamenatra
Tokony ho tsaraina amin’ny fomba fiteniny koa ny olona izay ho filohan’ny repoblika. Tena mahamenatra tokoa ary manala baraka ny firenena ny fahenoana ny teny avoakan’ingahy Ravalomanana Marc. Tsy ny Malagasy ihany no mahatsapa izany fa hatramin’ny vahiny rehetra izay maheno ny teny avoakan’ny vavany.
Ingahy Ravalomanana Marc dia olona tsy menatra mihitsy. Tsy mahay teny frantsay izy nefa mizahozaho eo anoloan’ingahy Ratsiraka amin’izany. Mbola resahin’ny olona hatramin’izao ny teny nataony fony mbola teo amin’ny fitondrana milaza ny tetezana nataony hoe « la pont » nefa « le pont » no fiteny. Dia rehefa nisy nibitsika taminy fa « le pont no izy prezidà fa tsy « la pont » izany » dia tsy taitra akory izy namaly hoe na « la pont » na « le pont » dia tetezana ihany izany e ! ary tena valiany mafy ho henon’ny olona rehetra izany.Tena mahamenatra!
Tia miteny anglisy koa ingahy Ravalomanana Marc, nefa mifampikitika ny vazaha izay maheno izany. Mihomehy fotsiny sisa ataon’ireo Malagasy miaraka aminy. Lasa fialamboly aza no andraisan’ny olona ny fomba fiteniny satria lasa hatsikana indray. Izany ve no filoham-pirenena ?
Tsy hay intsony ny fanaovany “ialahy” olona ambony izay miresaka aminy. “Avia aty ialahy”, nefa i Manandafy Manandafy Rakotonirina izay olomangam-pirenena sady filohan’antoko ity antsoiny. Toa izany koa no anivaivany ny Jeneraly maro tao amin’ny tafika Malagasy izay naira-miasa taminy tamin’ny taona 2002-2008 ireny. Tsy vitan’ny eny amin’ny toerana miafina na birao azy sy ny mpiara-miasa aminy izany fa hatreny ampivoriana sy ankalamanjana izay eny imasom-bahoaka no anaovany izany. Dia gaga sy talanjona ny olona rehetra izay mahita fa indrindra ireo izay manaja ny soatoavina Malagasy.
Tsy misy olona hajainy fa hatramin’ny pasitera izay naira-niasa taminy tao amin’ny fiangonana nataony ialahy avokoa.
Mbola tsy afaka tao amin’ny sain’ny Betsileo koa ny nanaovany tao Ambositra hoe “tsy misy ilaina anareo avy eto Ambositra fa sarotra ampandrosoana ianareo Betsileo”. Hatramin’izao dia mbola maro ny olona no miresaka izany ao amin’ity tanàna ity ary tsy mbola mankasitraka izany.
Maro tsy tambo isaina ny fomba fitenin’ingahy Ravalomanana Marc izay manafintohina olona.
Tsara ihany ny amerenana ireny rehetra ireny ankehitrny satria zava-dehibe eto amin’ny firenena izany hifidy filoham-pirenena izany. Tsy misy olona tsy ataon’i Ravalomanana Marc ialahy satria izy irery no ambony.